स्थलगत पेन्टिङ - साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — प्रकृति परिवर्तनशील छ । छिनछिनमा यसले रंग फेरिरहेको हुन्छ । प्रकाश परिवर्तन भएसँगै एउटै दृश्य फरक रूपमा देखिन थाल्छ । त्यसैले चित्रकारहरू कोठामा बसेर पेन्टिङ बनाउनुभन्दा बाहिर प्रकृतिको काखमा बसेर पेन्टिङ गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
छिटछिटो हात चलाएर पेन्टिङ सक्नुपर्ने बाध्यता चित्रकारमा हुन्छ । पहिले एक्लै वा सानो समूहमा चित्रकारहरू स्थलगत पेन्टिङ गर्न निस्कन्थे । तर चार महिनाअघि फेसबुकबाट जोडिएको चित्रकारको समूहले नेपालमा औपचारिक रूपमा स्थलगत चित्रकला कार्यशाला सुरु गर्‍यो ।
हरेक शनिबार विभिन्न क्षेत्रमा गई पेन्टिङमा तिनलाई उतारे । तिनै पेन्टिङहरूको मंगलबारदेखि बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलमा ‘शनिबारे स्थलगत चित्रकला प्रदर्शनी’ सुरु भएको छ । चित्रकारहरूले हनुमानढोका, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, थिमि, स्वयम्भू, चाँगुनारायण, टेकु, चापागाउँको बज्रबाराही, खोकना, नयाँ र पुरानो गुहयेश्वरी, बौद्ध, बुङमति, चोभार र शंखमूल पुगेर बनाएका पेन्टिङहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् ।
प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उपत्यकाको कलात्मक जीवनलाई अझै कलात्मक रूपमा चित्रकारहरूले जोगाउने बताए । तर जति मात्रामा यिनको विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति दिन नसकेको पनि उनले स्विकारे । ‘नकुँदिएको हीरा हो नेपाल । कुँद्यौं भने बहुमूल्य देशको रूपमा नेपालको निर्माण हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा कलाकार नै दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।’ चित्रकारहरूले सभ्यता, संस्कृतिसँगै देशले विभिन्न समयमा पार गरेका परिवर्तनका पहाडहरूलाई महत्त्वका साथ पेन्टिङमा उतार्न जरुरी रहेको नि उनले बताए ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि परिकल्पना अनुसारको समाज निर्माण हुन सकेन । २०१७ पछि निरंकुश वातावरण आयो । २०४६ पछि केही सहज वातावरण बन्यो ।
त्यो उदार समाजले कला संस्कृतिलाई तीव्रता प्रदान गर्‍यो । फेरि अन्तद्र्वन्द्वमा फस्यो । २०६२/०६३ मा जनक्रान्ति राष्ट्रव्यापी रूपमा क्रान्ति भयो । ‘तर ती क्रान्तिको परिकल्पना र त्यसका आरोह अवरोहहरू मैले कलाकारका पेन्टिङहरूमा देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंको रिङरोडमा मात्रै २० लाख मानिस आएका थिए । जुन ठाउँमा उभिए पनि मानिस टनाटन थिए । ठूलो जमघट थियो । त्यस्तो पहिले कहिल्यै भएको थिएन । यस्ता घटनाक्रमहरू पनि कलासाहित्यमा आउनुपर्छ ।’ राज्य एकिकरणको अभियानलाई प्रतिविम्बित गर्ने सिर्जना आउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
चित्रकारहरू दिवेश प्रधान, राकेशचन्द्र श्रेष्ठ, दीपेन्द्रमान बनेपाली, केशवराज खनाल, रामकृष्ण थापा लगायतका चित्रकारहरूको समूहले ४ महिनाअघि फेसबुकबाट स्थलगत चित्रकला कार्यशाला सुरु गरेको थियो । अहिले १५ हप्ता सकिइसकेको छ । यो अहिले दिनप्रतिदिन प्रभावकारी बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौं बाहिर पनि यो अभियानले निरन्तरता पाउन थालेको छ ।
यसमा क्रमश: कलाकारहरूको संख्या थपिँदै गएको चित्रकार एवं अभियान्ता दिवेशले बताए । यसले कलाको विकाससँगै कलाको माध्यमबाट स्थानीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा समेत ठूलो सहयोग मिल्ने उनको दाबी छ ।
‘हरेक शनिबार ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका नयाँ ठाउँमा पुगेर प्रत्यक्ष रूपमा दृश्यावलोकन गर्दै चित्र उतार्दा एक त आफू पनि प्रकृतिसँग सिक्न पाइने र अर्काे नयाँ चित्र बनाउन पाइने भएकाले चित्रकारहरू यस अभियानप्रति लालायित भएका छन्,’ उनले भने, ‘पहिलेका दृश्यहरू मेटिने क्रममा छन् । आधुनिकतासँगै पुराना कुराहरू हराउने क्रम बढदो छ । त्यसलाई कलाको माध्यमबाट भए पनि जीवित राख्न पनि यो सहयोगी बन्न सक्छ ।’
यो अभियानले कलाकारलाई चित्रकलामा मात्रै सीमित गराएको छैन । स्थानीय अनुभवीहरू र पुरातत्त्वविद्समेत भेटेपछि चित्रकला गर्न सुरु गर्छन् । यो अभियानले नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र वास्तुकलाको गौरवलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अभियान्ताहरूको दाबी छ । प्रदर्शनी एक हप्ता चल्नेछ ।
प्रकाशित : पुस १८, २०७५ ०९:१५
शुल्क बढ्दा सेवा मुस्किल
पुस १८, २०७५ दुर्गालाल केसी
दाङ — घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अत्यधिक शुल्क वृद्धि भएको छ । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्वामित्व हस्तान्तरण भएको ३ महिनामा सर्वसाधारणले सेवा लिनै नसक्ने गरी शुल्क बढाएको हो । सबै सेवामा मंगलबार शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।
घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर
हालसम्म २५ रुपैयाँ रहेको ओपीडी शुल्क १ सय र ३० बनाइएको छ । यस्तै इमर्जेन्सी शुल्क २ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नि:शुल्क हुँदै आएको प्रसूति सेवामा समेत शुल्क बढाइएको छ । यसबाट प्रसूति सेवा लिनेहरू समस्यामा पर्ने देखिएको छ । अहिले सबैतिर सुत्केरी हुँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नि:शुल्क गरिएको छ । सुत्केरीले यातायात तथा गर्भजाँच खर्चसमेत पाउने गरेका छन् तर प्रतिष्ठानमा सामान्य सुत्केरी हुँदा अब ३ हजारभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । जटिल प्रकृतिको सुत्केरीका लागि ५ हजार र शल्यक्रियाबाट सुत्केरी गराउँदा १२ हजार लाग्ने सूची जारी गरिएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि शुल्क नलिई भर्ना भएका बिरामीले शय्याका लागि अब प्रतिदिन २ सय २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । भिडियो एक्सरे ५ सयबाट ६ सय, मुख्य शल्यक्रिया ५ बाट १२ हजार, मध्यम खालको १ हजार ५ सयबाट ६ हजार ५ सय र सामान्य शल्यक्रिया १ हजारबाट २ हजार ५ सय पुर्‍याइएको छ । प्रयोगशाला शल्यक्रियाको १५ हजार, जनरल एनेस्थेसियाको ३ हजार ५ सय र स्पाइनल एनेस्थेसियाको २ हजार ५ सय तोकिएको छ ।
प्रतिष्ठान आफंै कमाएर खर्च गर्ने संस्था भएकाले शुल्क बढाउनुपरेको उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले बताइन् । यसअघि सुत्केरी महिलाले पाउँदै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रमको बजेट पनि प्रदेश सरकारले राखेर प्रतिष्ठानमा दिन नमिल्ने बताएकाले शुल्क लिन बाध्य भएको उनले जनाइन् । यसअघि सरकारले सामान्य सुत्केरी गराउँदा १ हजार ५ सय, जटिल प्रसूतिको ३ हजार र शल्यक्रियाको ७ हजार दिँदै आएको थियो । यसैगरी गर्भजाँचको प्रतिव्यक्ति ८ सय र भाडा खर्च १ हजार आउने गरेकामा प्रतिष्ठान बनेपछि रोकिएको भण्डारीले जनाइन् ।
फिर्ता गर्न माग
प्रतिष्ठानले उपचार सेवाको शुल्क वृद्धि गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । सदरमुकाममा अर्को सरकारी अस्पताल नभएको अवस्थामा अत्यधिक शुल्क वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवा लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने नागरिक अगुवाले बताए ।
नागरिक समाज, प्रतिष्ठान सरोकार समिति र राजनीतिक दलले प्रतिष्ठानले मंगलबारदेखि सेवा शुल्क वृद्धि गरेकामा आपत्ति जनाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नागरिक समाजको मंगलबार घोराहीमा बसेको बैठकले ४ गुणासम्म स्वास्थ्य सेवा बढाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
यसैगरी, प्रतिष्ठान सरोकार समितिको बैठकले शुल्क वृद्धि नगर्न माग गरेको छ । प्रतिष्ठानले गरेको वृद्धिले सर्वसाधारणको उपचार प्रभावित हुने समितिका संयोजक नारायणप्रसाद भुसालले बताए । यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विज्ञप्तिमार्फत शुल्क बढाएकामा आपत्ति जनाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अस्पतालले दिँदै आएको सेवासुविधाको कटौती गरी शुल्क वृद्धि गर्नु दु:खद भएको जनाएका छन् ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि शुल्क वृद्धि नगर्न आग्रह गरेका छन् । पोखरेललाई भेट्न पुगेको प्रतिष्ठान पदाधिकारी टोलीलाई उनले जनतालाई सेवा लिनै कठिन हुने खालको शुल्क नतोक्न आग्रह गरे । रोकिएको बजेट निकासा गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले तत्काल जनतालाई सुविधा हुने गरी सेवा दिन सुझाव दिए ।
सेवा वृद्धिको दाबी
प्रतिष्ठानले शुल्कसँगै सेवा पनि वृद्धि गरेको दाबी गरेको छ । सेवा विस्तार गरी शुल्क लिन थालिएको अस्पतालका निर्देशक डा. ऋतु शर्मा बरालले बताइन् । विभिन्न प्राविधिक जाँचमा उच्च प्रविधि प्रयोग गर्न थालिएको उनले जनाइन् । एकसाथ धेरै परीक्षण गर्न सकिने यन्त्र जडान गर्न थालिएको उनी बताउँछिन् ।
आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन, डायलासिस सेवा प्रभावकारी, नवजात शिशुका लागि ६ बेडको व्यवस्था, एक महिनासम्मका शिशुको उपचार विशेषज्ञ चिकित्सकबाट र ४ शल्यक्रिया कक्ष थपजस्ता काम गर्न थालिएको बरालले बताइन् । मंगलवारदेखि ओपीडी काउन्टरको समय बिहान ८ देखि १२ बजेसम्म कायम गरिएको छ । शुक्रबारभने ८ देखि ११ बजेसम्म टिकट काटन सकिनेछ ।
प्रकाशित : पुस १८, २०७५ ०८:५५